DHAGEYSO: RW Xasan Cali Kheyre oo ka dhawaajiyay Sirta iyo Ujeedka uu maanta u tagay magaalada Baydhabo. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: RW Xasan Cali Kheyre oo ka dhawaajiyay Sirta iyo Ujeedka uu...
Baydhabo (Halqaran.com) – Xasan Cali Khayre, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa waxa uu fahfaahin dheeraad ah uu ka bixiyey socdaalka uu Sabtidii maanta ku tegay magaaladda Baydhabo, xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed.
Boqolaal dadweyne ah oo loo diyaariyey soo dhaweynta Kheyre iyo mas’uuliyiin kala duwan ayaa ka qeybgalay soo dhaweynta ra’iisul wasaaraha.
Shacabka reer Baydhabo ayaa waxa uu kula hadlay garoon kubadda cagta Dr. Ayuub Stadium, halkaasi oo uu uga mahadceliyey isu soo baxooda.
Mas’uuliyiin uu ugu sarreeyo madaxweyne Lafta-gareen ayaa ka qeybgalay qaabilaada, kuwaasoo u galbiyey dhanka madaxtooyadda.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa ujeedka socdaalkiisa waxa uu ku tilmaamay mid uu ugu kuur-galayo xaaladda amni iyo wada shaqeynta maamulka Koonfur Galbeed kala dhaxeysa dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo.
HOOS KA DHAGEYSO CODKA RW KHEYRE:
Dr. Ayuub Stadium